XOG:- Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo ku loolamaya qofkii qaban lahaa xilka madaxweynaha Hirshabeele – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo ku loolamaya qofkii qaban lahaa xilka madaxweynaha Hirshabeele
Waxaa durbaba muuqanaya in kooxo siyaasadeed iyo awoodo iska soo horjeeda oo ku loolamaya shirka maamul u sameynta labada gobol Hiiraan iyo Sh/dhexe, gaar ahaan shaqsiga noqonaya madaxweynaha maamulka cusub ee labadaasi gobol “Hirshabeele”.
Waxaa gelinkii hore ee maanta shirka Jowhar la wareegay ciidamo ka tirsan dowladda iyo maleeshiyo beeleed kasoo jeeda beesha Agoon Yar/Abgaal, kuwaas oo ka biyo diidan fara-gelin ay sheegeen inuu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa siyaasada ku haayaan doorashadda madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ee maamulka Hirshabeele.
Sidoo kale, waxaa soo ifbaxaaya in qaabka dhismeedka maamulka Hirshabeele ku loolamayaan labada kooxood ee kala ah Damjadiid oo haatan maamusha madaxtooyada Villa Soomaaliya iyo Aala-Sheekh oo horay sidaan oo kale isugu dhacay doorashadii madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug.
Madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd Sheekh Shariif Sheekh Axmed haatanna ah musharax markale u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa loolan adag kula jira madaxweyne Xasan Sheekh, shaqsiga noqonaya madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeele, wuxuuna mid waliba doonayaa inuu halkaas kusoo baxo madaxweyne u dhega-nugul siyaasadiisa.
Tuhunka ugu weyn ee soo baxaya ayaa hadane wuxuu yahay in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu wax badan ka ogaa ciidamadii maanta la wareegay hoolka uu shirka Jowhar ka soconaayay, kuwaas oo lagu sheegay inay isku heyb kasoo jeedaan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta magaalada Jowhar usoo diray xildhibaano dhowr ah oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo dhaqaale faro badan ku bixinaya sidii loo soo saari lahaa shaqsiga ay madaxtooyada la rabto xilkaas, waxaana si weyn loo hadal haayaa shaqsigaasi inuu yahay Cali C/laahi Cosoble oo beel ahaan kasoo jeeda beesha Xawaadle.
Dhinaca kale, urur goboleedka IGAD iyo siyaasiyiinta kale ee kasoo horjeeda siyaasada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheeynaya inay xilka madaxweynaha maamulka Hirshabeele u caleemo saaraan Maxamed Cabdi Waare oo taageero buuxda ka helaya IGAD.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mid waliba wuxuu ka fikirayaa sidii uu u hanan lahaa xildhibaanada labada gobol ee la filaayo inay ka mid noqdaan baarlamaanka federaalka, oo soo xulistooda ku xiran hadba dhismaha maamulka haatan loo fadhiyo Jowhar.
Ugu dambeyntii, loolanka siyaasadeed ee dhinacyada isaga soo horjeeda shirka Jowhar, ayaa laga yaabaa marka dambe inay saameyn adag ku yeelato sii socoshada shirka oo aan ilaa iyo haatan la ogeyn waqtiga lasoo dooranayo madaxweynaha maamulka Hirshabeele, inkastoo maalinta berri oo ay taariikhdu ku beegan tahay 15-ka October lagu balansanaa inay dhacdo doorashadaas.
DIGNIIN:- Fadlan Dhowr Xuquuqda Qoraalka